WALWAL: Xaalada Caafimaad Ee Sadio Mane Ee Ka Hor Kulanka PSG Oo Walwal Ku Abuurtay Jamaahiirta Liverpool. - Gool24.Net
WALWAL: Xaalada Caafimaad Ee Sadio Mane Ee Ka Hor Kulanka PSG Oo Walwal Ku Abuurtay Jamaahiirta Liverpool.
November 27, 2018 Mahamoud Batalaale
Kooxda Liverpool ayaa isku diyaarinaysa kulanka shanaad ee heerka Guruubyada UEFA Champions league ee ay u safrayso magaalada Paris halkaas oo ay kulan adag kula soo ciyaari doonto PSG laakiin ka hor kulankan waxaa jamaahiirta Liverpool walwal ku abuuray xaalada caafimaad ee Sadio Mane.
Liverpool ayaa kooxda PSG kula ciyaari doonta Parc des Princes waana kulan muhiimad khaas ah u yeelan doona labada kooxoodba maadaama oo labada kooxoodba ay dagaal ugu jiraan in ay u soo baxaan wareega 16ka kooxood ee Champions League.
Laakiin Jurgen Klopp iyo jamaahiirta kooxdiisa Liverpool ayaa sugaya in ay war wanaagsan ka maqlaan xaalada caafimaad ee Sadio Mane kaas oo uu xanuun soo food saaray ka hor kulanka PSG. Galinka hore ee maanta oo talaado ah waxay Liverpool tababar ku qaadan doontaa Melwood inta ayna Paris u duulin.
Waxayna Liverpool maanta hubin doontaa isla markaana la qiimayn doonaa xaalada Sadio Mane iyada oo haddii uu awoodi waayo in uu ciyaaro kulanka PSG ay dhibaato wayn ku noqon doonto Reds oo kulamada martida ee Champions League aad ugu soo liidatay.
Liverpool ayaa min kaalinta kowaad ilaa kaalinta afraad kaga dhamaysan karta Group C laakiin haddii ay guul ka soo gaadho kooxda PSG isla markaana ay Napoli garaacdo Red Star Belgrade waxay Reds u soo bixi doontaa wareega 16ka iyada oo aan la gaadhin kulamada lixaad ee ugu danbeeya.
Kooxaha Liverpool, Napoli iyo PSG ayaa kulamada shanaad iyo lixaad ee heerka Groupyada Champions league waxay gali doonaan dagaal culus iyada oo habeen danbe ay PSG iyo Liverpool madaxa isla gali doonaan.
Walwalka Liverpool ee Sadio Mane waxaa barbar socda in PSG lafteedu ay wali sugayso in Neymar Jr iyo Mbappe loo xaqiijiyo in ay ciyaari karaan kulanka Liverpool waana saddex xidig oo labada kooxood muhiimad wayn ku leh.
Sadio Mane oo dhawaan qalinka ku duugay qandaraas cusub oo waqti dheer ah kaas oo uu todobaadkii ku qaadanayo £150,000 kun oo gini ayaa 7 gool u soo dhaliyay Liverpool kadib markii uu saftay 17 kulan oo xili ciyaareedkan ah.
Wixii ka soo kordha xanuunka Sadio Mane iyo haddii uu tababarka maanta qaadan karo waxaad insha Allah kula socon doontaan wararka soo socda.